I-Google Analytics: Ukulandela ngomkhondo ikhasi lesithathu Martech Zone
Kungenzeka ukuthi ufunde ukuthi ngithenge ikhasi ku- MillionDollarWiki. Kuyifanele imali ukusiza ukushayela ithrafikhi esizeni sami - ngicabanga ukuthi leli yithuba elikhulu lezinkampani eziningi lokwenza utshalomali oluncane ngokukhokha okukhulu. Sibonga ngokukhethekile ku UJohn Chow ngokuvusa umbono!
Ngithenge i- imeyili Marketing, Ukubhuloga Kwebhizinisi futhi Web Analytics amakhasi futhi ngifuna ukuqhubeka nokwandisa okuqukethwe ukuze kube ngumthombo ophelele kunoma yini ephathelene ne-imeyili Marketing kanye ne-Corporate Blogging ngokulandelana. Ngokutshala imali ngedola elilodwa, empeleni akusilo iqiniso uma iWiki iqhubeka nokukhula ekuthandeni.
Umbuzo wangempela uwukuthi ngabe kuzobonwa njengomthombo othembekile noma cha! Uma kungenjalo, abantu ngeke bayisebenzise - futhi izokwehluleka ukuthola imbuyiselo ekutshalweni kwami. Ngikholwa ukuthi kufanelekile ukugembula noma kunjalo - ikakhulukazi uma ngingakuthola lokho I-LCD uJohn anayo emncintiswaneni wakhe! 🙂
Ukuze 'ngibuke ukutshalwa kwemali kwami', ngifuna ukwazi ukulandelela ukuthi bangaki abantu abavakashela ikhasi le-wiki. Ngokujabulisayo, abantu baseMillionDollarWiki bavumela abantu ukuthi bashumeke amanye amakhasi ngaphakathi kwekhasi labo besebenzisa ozimele. I-syntax ye-Wiki imi kanje:
Iwebhusayithi = http: //www.yourwebsite.com/your.html
umngcele = 0
umqulu = cha
Ngakho-ke, ukulandela umkhondo wekhasi kulula kakhulu. Ngingeze ikhasi ku- isiza sami leyo inekhodi yami yokulandelela ye-Google Analytics kuyo. Ngikhombe lelo khasi ohlakeni lwewebhusayithi ngasetha ukuphakama nobubanzi bobabili kwaba ngu-1.
iwebhusayithi = https: //martech.zone/mytrackingpage.html
Ngaso sonke isikhathi lapho othile evakashela ikhasi le-wiki, lizovela ku-Google Analytics yami. Ukuqinisekisa ukuthi ngiyakwazi ukuyilandelela ngokuzimela, ngingeze ipharamitha kukhodi yami yezibalo ukulandela umkhondo wekhasi le-Wiki. Le yikhodi eku-mytrackingpage.html: